February, 10-2016 TWITTER FACEBOOK PRINT THIS PAGE SEND TO A FRIEND
Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka Dr. Axmed Cali Dahir ayaa ku eedeeyay dowladda Kenya inay isku dayday inay hor-istaagto dacwadii ku saabsaneyd muranka xaga Badda ee ay u gudbiyeen Maxkamadda Cadaaladda ee fadhigeedu yahay dalka Holland.
Dr. Axmed Cali Daahir Xer ilaaliyaha Guud ee Qaranka ayaa sheegay in Kenya ay gudbisay dacwad la xiriirta in muranka Badda kala dhaxeeya lagu dhameeyo wada hadal, isagoo xusay in dacwada ay hor-taallo Maxkamadda Holland ee dambiyada Caalimag , isla markaana aysan jirin wada hadal ah.
“Sidaad la socotaan Umadda Soomaaliyeed waxa ay gudbisay dacwad quseeya muranka badda ee labada dal Qaanuuniyanna waxa ay ahayd in dowladda kenya ay ka soo jawaabto laakiin waxa ay keentay is hor istaag annagana is hortaaggaas ayaan jawaab ka bixinnay dacwaddana waan gudbinnay, waxa la dhageysanayana waa is hor istagga kenya ee Arrintan iyo Dacwaddeenna aan ku diidnay Is hor istaaggaas”ayuu yiri Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka.
Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka Dr. Axmed Cali Dahir ayaa sheegay inay ka go’an tahay in iyaga iyo Kenya ay ku kala baxaan Maxkamadda Cadaaladda.
Dowladda Kenya ayaa dhowaan sheegtay in qaab wada hadal ah lagu dhameyn doono muranka badda ee kala dhaxeeya Soomaaliya.
Golaha Wasiirada DFS ee ku aadan dhererka xadka badda Soomaaliya WARSAXAFADEED.